Ciidamada Soomaaliya diyaar ma u yihiin in ay amniga kala wareegaan AMISOM? - BBC News Somali
Image caption 1,000 askari oo AMISOM ayaa dalka ka bixi doona
Kunkii askari ee ugu horeeyey oo ka tirsan AMISOM ayaa Soomaaliya ka baxaya oo aanan kuwa kale lagu badali doonin, taasoo qeyb ka ah qorshe amniga dalka loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Hadaba maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha horyaala ciidamada Soomaaliya?
Shir socdey muddo shan maalmood ah ayaa lagu soo gabogabeeyey magaalada Muqdisho, kaasi oo dhexmarayay madaxda AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya, waxaana laga soo saaray go'aano ay isla meel dhigeen labada dhinac.
Qodobada shirka kasoo baxay waxaa ka mid ah in AMISOM ay ciidamada Soomaalida ku wareejiso amniga dalka.
Waxaa kale oo qodobada ka mid ah in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaado hawlgal ciidan oo wadajir ah oo dalka looga saarayo Alshabaab.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirishiid Cabdullaahi Maxamed ayaa BBCda u sharaxay qodobada kale ee shirka kasoo baxay "Labo qodob ayaa ugu muhiimsanaa shirka, koow waa sidii Alshabaab dalka looga saari lahaa ama awoodooda loo yareyn lahaa, iyo qodobka kale oo ah sidii ciidamada Soomaaliyeed loogu diyaar garayn lahaa in ay la wareegaan amniga dalka, iyo in goobaha ugu macquulsan ee ay AMISOM ku sugantahay ay hadda dowladda la wareegi karto".
Ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo qeyb ka saxiixay war murtiyeedkii shirka ayaa isna yiri " Waxaan isla gorfeynay sida ugu wanaagsan ee lagu dhaqan galin karo qodobada shirka kasoo baxay, loogana dhigi karo kuwa natiijo wax ku ool ah ku yeesha furumaha dagaal ee Alshabaab ka dhanka ah".
Labada dhinac ayaa ku balamay in ay shir kale isugu imaan doonaa bisha Agoosto ee sanadkan, kaasi oo si kama dambeys ah la'isula meel dhigi doono qorshaha hawlgalka ka dhanka ah Alshabaab.
Hadaba su'aasha ugu muhiimsan ee la isweeydiinayo ayaa ah "Ciidamada Soomaaliyeed diyaar ma u yihiin in ay AMISOM kala wareegaan amniga dalka?".
Si su'aaashaasi looga jawaabo waxaa loo baahanyahay in la darso caqabadaha iyo fursadaha hadda jira.
AMISOM oo lagu eedeeyay in ay ka cagajiideyso bixinta magdhow dad ay laysay
Caqabadaha Heysta Ciidamada Soomaaliya
Caqabada koowaad ee heysata waa mid u laabanaysa kuwii dagaalada sokeeye laga dhaxlay oo aad u tiro badan, oo ay koow ka tahay kala qoqobnaanta ciidamada, kala shakiga bulshada qaarkeed dhex yaala iyo waliba danaha siyaasadeed ee is diidan ee laga yaabo in dalka ay ka jiraan.
Tan labaad waa xagga tababarka ciidamada, inta badan ciidamada ma heystaan tababar ku filan oo ay ku hanan karaan amniga dalka, kuwa heley tababar sanadihii dhawaana waxaa soo tababary dalal kala duwan, mana ahan kuwa si sahlan isugula jaanqaadi kara.
Soomaaliya wali waxaa saaran cunaqabataynta hubka ee Qaramada Midoobey, taasi oo madaxda dowladda marar badan ay ka shanqariyeen in ay caqabad weyn ku tahay dhismaha ciidamo qaran , balse dadka qaarkood waxa ay farta ku fiiqayaan in dalka uu yaalo hub ku filan, ayna tahay in hubkaasi uu gacanta dowladda soo galo, kan hadda ku jirana si wanaagsan loo maamulo.
Xagga qalabka, saanada , gaadiidka iyo waliba xerooyinkii loo baahnaa ma heystaan ciidamada, waana caqabad aad u weyn oo ragaadin karta horumar kasta oo la fili lahaa.
Fursadaha horyaala ciidamada Soomaaliya
Image caption Shirkii London
Fursado badan ayaa hadda jira, kuwo kalana mustaqbalka dhow ayay abuurmi karaan haddii kuwa hadda jira laga faa'iideysto.
Fursadda koowaad waa sida dowladdan ay ugu heelantahay dhismaha ciidamo qaran oo awood leh, kuwaasi oo loo dajiyey miisaaniyad maangal ah.
Beesha caalamka ayaa iyaduna sidoo kale muujisey sida ay diyaar ugu tahay in la dhiso ciidamada, waxaana lagu bixinayaa dhaqaale badan, sida lagu ansixiyey shirkii London ee bishii May la qabtay.
Fursada kale ee jirta ayaa ah in shacabka ay muujiyeen biseyl ka badan kii hore, waxaana xitaa socda olole yabooh loogu samaynayo ciidamada xoogga.
Sidoo kale xasiloonida siyaasadeed ee illaa xad hadda dalka ka jirta ayaa noqon karta fursad wanaagsan, taasi oo abuurtey jawi wanaagsan oo ka dhaxaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, iyada oo la sameeyey guddiga amniga qaranka oo ay xubno ka yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka.
Balse fursada ugu weyn ayaa ah qorshaha loo dajiyey dhismaha ciidamo isku dhaf ah oo gaaraya 18,000 askari oo laga soo kala xulayo dalka oo dhan, qorshahaasi oo haddii uu hirgalo asaas adag u noqon kara ciidamo ku filan hanashada amniga dalka guud ahaan.
Image caption AMISOM waxa ay baneyneysaa goobo muhiim ah oo ka tirsan caasimadda
Ciidamada Nabad illaalinta Midoowga Afrika ee Soomaaliya waxa ay dalka soo galeen 10 sano ka hor, waxayna soo mareen marxalado kala duwan.
Hadda tiradooda waxaa la sheegey in ay tahay 22,000 askari oo ka kala socda dalalka Uganda, Kenya, Itoobiya, Burundi iyo Jabuuti iyo dalal kale oo iyagu soo direy unugyo ciidamo ah oo qeyb ka ah AMISOM Police.
Balse markii ugu horeysey ayaa sanadkani waxa dalka ka baxaya kunkii askari ee ugu horeeyey, kuwaasi oo aanan booskooda la badali doonin.
Sidoo kale ciidamada AMISOM waxa ay sanadkani baneynayaan markii ugu horeysey goobo waaweyn oo caasimada ku yaala sida garoonka ciyaaraha Muqdisho, iyo Xaruntii Jaalle Siyaad, iyaga oo sidoo kale horey u baneeyey jaamacaddii Gaheyr.
AMISOM waxaa hadda haysta culeys xagga miisaaniyada ah kadib markii Midowga Yurub uu boqolkiiba 20% hoos u dhigey lacagtii AMISOM lagu bixin jirey, sidaasi darteed shirka 5ta maalmood waxaa kasoo baxay qodob lagu dalbanayo in AMISOM la siiyo lacag ku filan oo ay waajibaadkeeda ku gudato.
Qorshuhu waxa uu yahay in gabi ahaanba ay banaanka uga baxaan caasimadda, sidoo kalana si tartiib tartiib ah marka dambe dalka uga baxaan.
Balse wali ma jiro muddo cayiman oo lagu heshiiyey oo AMISOM gabi ahaanba dalka isaga baxayso, waxayna wax kasta ku xirnaan doonaan horumarka ay sameeyaan ciidamada Soomaaliya.
Shir madaxeedka IGAD oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay